MA FIKAMBANANA mialoha amin'ny orinasa - Ikkaro
firosoana >> Fikolokoloana indostrialy >> Fikojakojana misoroka
Karazana fikolokoloana fisorohana
Ao anatin'ny fikojakojana fisorohana dia azo avahana karazany isan-karazany miankina amin'ny masontsivana ampiasaina amin'ny fampiharana azy:
baikoina: voalahatra ny hetsika ary atao ny fanamarihana tsindraindray. Azo atao izany arakaraka ny ora fiasan'ny ekipa na koa ny famaritana antony hafa. Ohatra, ny isan'ireo tsingerina, mileage, isan'ny faritra novokarina, sns.
vinavina- Ny manam-pahaizana iray dia tsy maintsy mamaritra hoe rahoviana no fotoana mety anaovany azy miankina amin'ny zavatra fantatra momba ny masinina na ny rafitra. Ho an'ity dia tsy maintsy fantatrao tsara ireo anton-javatra toy ny MTTF, MTBF, ary MTTB.
fahafahana- Araraoty ny fotoana fihenan'ny fikolokoloana. Toy ny rehefa tsy miasa ny indostria, ny fihenam-bidy, na rehefa kely ny fiatraikany amin'ny famokarana.
Ohatra, amin'ny informatika, ho an'ny foibe angon-drakitra, ny mpizara dia tsy maintsy 24/7, 100% no tadiavina. Noho izany, eto dia tsy mahita ny toerana misy azy io, ary ny matetika atao amin'ireto tranga ireto dia ny mitady redundancy (oh: RAID), raha sanatria misy zavatra tsy mahomby, dia hisy singa iray hafa vonona hisolo azy nefa tsy misy fiatraikany amin'ny misy. Teknika iray hafa dia ny fanaovana fefy, hanokanana ary misy rafitra azo soloina na amboarina nefa tsy misy fiatraikany amin'ny ambiny ...
Aza adino fa tsy io ihany no karazana fikolokoloana misy, raha mieritreritra ny hampihatra sy hifehezana ny fikojakojana ny orinasanao ianao dia tsy maintsy mianatra ny Fikolokoloana ary ny maminavina.